Yakachipa yakasarudzika kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Carbon simbi ndeye iron-kabhoni chiwanikwa chine kabhoni zvemukati me0.0218% kusvika 2.11%. Iyo inonziwo kabhoni simbi. Kazhinji, zvakare ine shoma shoma yesilicon, manganese, sarufa, uye phosphorus. Kazhinji, iyo yakakwira iyo kabhoni yezvinhu yesimbi kabhoni, inowedzera kuomarara uye inowedzera simba, asi iyo yepasi ipurasitiki. Carbon simbi CNC yekugaya ine huwandu hwakawanda hwekushandisa uye inokodzera kwakawanda mamishini zvikamu.
CNC lathes inogona kugadzirisa yakaoma kutenderera maumbirwo emuviri. Kune kabhoni simbi yekugaya zvikamu, iyo isina kugadzika yakagadziriswa, uye yekumhanyisa-inomhanyisa inotenderera yekugaya yekucheka inoshandiswa kufambisa iyo isina chinhu pane isina chinhu kucheka zvinodiwa maumbirwo uye maficha. The azvikuya zvikamu machine centre iri chaizvo akakodzera kugadzira workpiece mhando dzakadai rakakombama zvikamu uye curved tooling maturusi. Yakakombama zvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda weindasitiri, senge turbine mashizha, ngarava dzinofambisa, zvigadzirwa zvemaindasitiri zvine cylindrical conical huso, nezvimwe. Ouzhan inopa yakagadziriswa kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvemuchina masevhisi kune anokosha vatengi.
Yakagadziriswa michina kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvekugadzirisa zvigadzirwa
Mashoko Yakadzika kabhoni simbi, yepakati kabhoni simbi, yakakwira kabhoni simbi, revulcanized yemahara-yekucheka simbi, revulcanized uye zvakare-phosphorus yemahara-yekucheka simbi, uye isiri-sulfide yakakwira manganese simbi (manganese zvemukati anodarika 1%)
Surface kurapwa Iyo yekumusoro kurapwa kwekabhoni simbi inogona kuve inoenderana maererano nezvinodiwa, zvakadai sekupfura nenyunje, sandblasting, kumanikidza mvura, pickling zvichingodaro.
Kudzora kwemhando Kubva pane zvinhu kusvika pakurongedza, iyo nzira yese yekubatanidza yekuyera muchina yakanyatso kudzorwa.
Kushandisa Inoshandiswa mumaindasitiri anorema, maindasitiri akareruka, indasitiri yezuva nezuva zvinodiwa, kushongedza kwekuvaka uye mamwe maindasitiri
Pashure: Chinese mugadziri CNC yetsika kabhoni simbi yakagezwa zvikamu
Zvadaro: OEM kabhoni simbi yekugaya maindasitiri emuchina zvikamu
OEM Stainless simbi CNC machine zvikamu zve sta ...